डा.गोविन्द केसीको सबै माग पुरा गर्न सकिन्न : पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
डा.गोविन्द केसीको सबै माग पुरा गर्न सकिन्न : पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’
काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले वरिष्ठ चिकित्सक गोविन्द केसीको सबै माग सम्बोधन गर्न नसकिने स्पष्ट पारेका छन्।
अध्यक्ष दाहालले सार्वभौम संसदलाई ‘यो गर’ भनेर आदेश दिने अधिकार वरिष्ठ चिकित्सक केसीलाई नरहेको प्रतिक्रिया पनि दिए। बिहिबार भरतपुर विमानस्थलमा संचारकर्मीहरुले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै उनले वरिष्ठ चिकित्सक केसीको मागको सम्बन्धमा सार्वभौम संसदले आवश्यक निर्णय लिने पनि बताए। सरकारसँग सो मागलाई थपघट गर्ने अधिकार रहेको अध्यक्ष दाहालको भनाई छ।
अध्यक्ष दाहालले वरिष्ठ चिकित्सक केसीलाई जुम्लाबाट काठमाडौं ल्याएर उपचार गराउन पहल भईरहेको पनि जानकारी दिए।